Ny filoham-pirenena Honduran dia namporisika ny Kaongresy nasionaly hanaiky ny fandrisihana ny fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny filoham-pirenena Honduran dia namporisika ny Kaongresy nasionaly hanaiky ny fandrisihana ny fizahan-tany
Tamin'ity herinandro ity, ny filoha Juan Orlando Hernández dia nanentana ny Kongresy Nasionalin'i Honduras hanaiky ny lalàna momba ny famporisihana ny fizahan-tany. Ny lalàna dia hanampy amin'ny famoronana asa 250,000 2019 amin'ny taona 20 ao anatin'ny drafitra fitomboana 20/XNUMX Honduras.
"Honduras dia lasa toerana irina tena tian'ny mpizahatany," hoy i Hernández. "Ity lalàna vaovao ity dia hanome $ 165 tapitrisa USD ho famporisihana ny fizahan-tany mandritra ny 18 taona - famatsiam-bola napetraka hahazoana vola sahabo ho am-polony tapitrisa dolara ho an'i Honduras."
Vao avy nihaona tamin'i Hernández, talen'ny kongresy nasionaly Mauricio Oliva, ary ny solontenan'ny sehatry ny fizahantany ny talen'ny Ivotoerana fizahantany Honduran, Emilio Silvestri, vao haingana, nifanakalo hevitra momba ny lalàna tao amin'ny lapan'ny mpanao lalàna tany Tegucigalpa.
Tafiditra ao anatin'io fihetsika io ny famporisihana hetra ho an'ny indostrian'ny fizahantany, ny fanampiana ara-bola amin'ny fitsangatsanganana an-tanety sy an-habakabaka mankany Honduras, ary vola hampiakarana sy hanatsarana ny safidin'ny firenena mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 taona ho avy.
Vonona ny hiainga ny indostrian'ny fizahantany Honduran. Ny isan'ireo mpitsidika tsy lavitra eto amin'ny firenena dia nitsambikina 4 isan-jato hatramin'ny 2015, ary mitombo ny fandaniana amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena. Raha ampitahaina tamin'ny 2015 dia 14.7 isan-jato ny mpandeha tonga teto amin'ny alàlan'ny sambo fitsangantsanganana tamin'ny taon-dasa.
Nanome toky an'ireo mpikambana amin'ny indostrian'ny fizahantany nasionaly i Oliva fa “tsy handiso azy ireo ny kongresy.” "Hanohy ny andraikitra sy ny fanoloran-tena ilain'ity firenena ity isika," hoy izy.
"Honduras dia manana fitomboana lehibe mitombo," hoy i Hernández. "Ity lalàna ity dia ho teboka lehibe ho an'ny fizahan-tany Honduran."
Fanairana amin'ny seranam-piaramanidina Manitoba: mbola mitokona tsy ho ela